WOWOW Faucet fandroana varahina - Miantsena an-tserasera ao amin'ny Wowow Faucet
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana miely be / WOWOW Faucet fandroana miely be 360 ​​Degree Swivel Brushing Nickel Faucet
WOWOW Faucet fandroana be dia be 360 ​​Degree Swivel Brushing Nickel Fandroana fandroana fandroana
NICKEL FAUCET FITSIPIKA avo lenta - Ny tena vatana sy mpampifandray ny faucet tsy misy dikany dia vita amin'ny varahina mafy, adidy mavesatra ary maharitra. Ny loko mifanaraka amin'ny fantsom-pifandraisana pop-up sy ny fantsom-panafody nankatoavin'ny cUPC dia tafiditra ao.
TEKNOLOGY MAHAY MAHALALA AZO - Ny fametrahana miavaka "Y" endrika mampifandray haingana dia mora ny mametraka azy ary mamonjy ny vidin'ny fantson-drano.
FAUCET SWIVEL 360 DEGREE - Tanana roa Faucets fandroana miely be, Ny famolavolana singa 3 dia mety amin'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny rano. Tendrombohitra 3-lavaka miaraka amina endrika 8-inch mivelatra, ny halavirana dia azo ovaina arakaraka ny tena takiana aminao.
DESIGN moderina - Klasika amin'ny famaranana nikela borosy, famolavolana spout avo tsy manam-paharoa amin'ny famoronana fomba fanaingoana fandroana fandroana. WOWOW dia manisy sosona glase famehezana amin'ny velaran'ny nikela izay afaka manohitra ny fahalotoana sy ny harafesin'ny fampiasana isan'andro.
WARRANTY, FANOHANAN'NY MPIVAROTRA - Fiantohana 5 taona sy fanampiana ny mpanjifa no atolotra. Rakotra fiverenana 90 andro izy io. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fitaovana fandroana varahina
● Heavy-duty adiresy varahina matevina sy mpampitohy varahina
● Ny fitaovana avo lenta dia miantoka ny faharetan'ny faucet
Faucet kalitao premium ho an'ny fandroana fandroana
● CUPC voamarina
● fantson-drano Amerikana 3/8 mirefy amerikana
● NSF 61 (Vokatry ny fahasalaman'ny rano fisotro)
● Arovy ny fahasalaman'ny fianakavianao
Famolavolana spout avo lenta ho an'ny fanaparitahana mora foana
● Fitaovana aeratoria Neoperl avo lenta
● Azo esorina mivantana amin'ny tanana ho an'ny fanadiovana tsy misy fitaovana
● Ny famoronana haingana dia mampifandray ny fanamboarana mora apetraka irery fa tsy misy mpantsaka
● Tehirizo ny sarany fametrahana anao
Mpifanaraka amin'ny pop up drain stopper
● Fananganana ABS avo lenta, harafesina ary rangotra
● Misy sivana harona fanoherana ny sakana ao anaty tatatra
Tonga miaraka amin'ny fametrahana feno ho an'ny fametrahana
● 1 x fandroana fandroana rano fandroana nika borosy nikela
● 1 Andiana kojakoja ilaina; 1 x mpamadika trano fidiovana
● 1 x Y mampifandray haingana
● Fantsona rano 2x 60 sm CUPC
SKU: 2320500 Sokajy: Faucets fandroana miely be, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: Nickel nopotehina, miely patrana
11.14 X 10.16 X 3.19 santimetatra
Taom-piasana 5 taona